Mitondra ny anjara fanampiany ny Fiangonana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Kere any atsimo
Mitondra ny anjara fanampiany ny Fiangonana
Emma il y a 17 jours
Tsy mitazam-potsiny ny Fiangonana. Manao izay tratran’ny ainy ny Fikambanana Vinsansianina: ny Filles de la Charité sy ny Lazaristes, miasa ao amin’ny Diosezin’i Taolagnaro
Mbola mamely mafy ny kere any Atsimo. Ny Distrikan’i Beloha sy i Bekily ahitana an’ i Tsivory, Amboasary, Beraketa, Antanimora, Bekily, Tsihombe, Ambovombe ao amin’ny Faritra Androy no tena voa mafy. Voakasika ihany koa ny tanàna vitsivitsy ao amin’ny Faritra Anosy. Nipaka hatrany amin’ny Distrikan’i Ejeda sy Ampanihy, Faritra Toliara, izy tamin’ity taona ity. “Misy isan-taona ny kere fa ny hamafiny no tsy mitovy”, hoy i Mompera Rafanomezantsoa Alexandre Zéfirin, lehiben’ny Fikambanana Congrégation de la Mission na Lazaristes. Mahery vaika ny fisehony isaky ny telo na dimy taona, toy ny mitranga amin’izao fotoana izao. Nanampy trotraka ny tamin’ity taona ity ny fisian’ny tioka mena: rivotra avy any atsimo, mitondra fasika mena. Rakotra azy avokoa hatramin’ny tanimboly.
Na dia mangahazo sy vomanga aza no tena foto-tsakafon’ny Tandroy; vary no zaraina mba ialana amin’ny fandaniana rano be loatra. Izay hita fa tena reraka, omena sakafo masaka. Misy kosa fianakaviana sasany omena fotsim-bary sy vola solon-daoka. Tsy ny olona ihany no kere fa ny biby fiompy ihany koa. Mahia kaozatra ny ondry sy ny osy ka voatery amidy mora. Ny tokony ho lafo 50 000 ariary taloha, voatery amidy 20 000 ariary monja. Ho fanampiana ny olona, vidin-dry mompera ny biby fiompiny. Misy olona kosa anankinana ny fikarakarana azy.
Misy vola nozaraina amin’ny toerana sasantsasany, hanakaramana “citerne”, toy ny ao Ambovombe. “Tena lafo be ny fitaterana rano. Ireny hitantsika tamin’ny tele ireny manko tsy rano zaraina fotsiny fa amidy. Ny anay kosa nozaraina mamaim-poana araka izay tratra”, hoy hatrany i Mompera Alexandre. Misitraka izany ny faritra amoron-dranomasina toa an’ Ambovombe Androy, Tsihombe ary Beloha. Efa nanao vovon-drano koa ry masera, toy ny ao Ambovombe. Ezaka be vao mba mahavita roa na telo. Misy koa fiaraha-miasa amin’ny mpanao soa avy any Espana saingy tsy mbola tafaverina ry zareo hatramin’izao, noho ny Covid-19. Toerana mamokatra anefa ny Faritra Androy, raha ampy ny rano. Raha misy orana indray mandeha amin’ny fotoam-pambolena ka miampy indray mandeha koa afaka roa volana dia efa ampy amokarana.
Tokony mitady vahaolana maharitra ny Fanjakana amin’ity kete ity. Tsy hahavita fotodrafitrasa goavana be anefa ry Mompera sy ry masera. Ho an’i Mompera Alexandre manokana, lalana no hitany fa lohalaharana. Rehefa vita hoy izy ny lalana, hihena ny asan-dahalo. Ho afaka mifamezivezy ny olona sy ny vokatra. Hiroborobo manaraka izany koa ny varotra. Ho mora ny fitaterana ny rano. Faharoa, hoy hatrany izy, ny tohodrano mba hahafahan’ny olona mamboly sy miompy. Efa nisy natomboka izany fa tsy tanteraka hatramin’ny farany.
Tsy marina hoy i Mompera ny filazana fa hoe: ampandosirina ny olona. Efa tsy mahita hohanina intsony izy ka aleony milefa. Mampiantrano sy mamahana olona an’arivony maro omena sakafo maraina, antoandro, hariva ry masera ao Taolagnaro amin’izao fotoana izao. Izany no vaha olana hita satria efa tapitra namidiny, talohan’ny nandaozany ny tanàna niaviany, ny fananana rehetra, hatramin’ny vilany. Tena sahirana ny olona. Tsy mahagaga raha miverina indray ny asan-dahalo. Mitombo ny fanakanana fiara, toy ny tao Tsivory. Ny mandroba sy maka olona an-keriny sisa no vahaolana ho an’ny sasany. Eo akaikin’ny olona kere mandrakariva ry masera sy mompera. Miezaka manampy araka izay eo ampela-tanana. Manohana be ny rahalahiny amin’izao asa fitiava-namana izao i Mompera Pedro cm. Voara-maso tsara ny fanampiana. Azo antoka ny fahatongavany amin’ny olona tokony homena azy. Fitaka sy mandiso fanantenana kosa ny fanisana olona, nefa ny sakafo tsy tonga. “Izay tsy miaina ny fahaiza-mizara mamaim-poana … mandrefy mandrakariva izay omeny sy ho azony ho takalon’izany”. (Fratelli tutti 140).